यदि तपाईंले भर्खरै फेसबुक म्यासेञ्जर एप अपडेट गर्नु भएको छ भने पक्कै पनि केही न केही परिवर्तन भएको अवश्य महसुस गर्नु भएकै होला । फेसबुकले निलो र सेतो कलरमा रहेको यस अघिको लोगोमा केही नयाँ कलर थपेको छ । कम्पनीका अनुसार भविष्यको म्यासेजिङको प्रतिबिम्बको रुपमा नयाँ लोगो ल्याइएको हो । जसले थप गतिशिल, रमाइलो र मानिसहरुसँग नजिक रहन इन्टिग्रेटेड फिचरलाई समग्र रुपमा अभिव्यक्त गरेको छ । तर कतिपयलाई सेतो...
काठमाडौँ / नेपालमा कोरोना संक्रमण बढिरहेको छ । कोरोना संक्रमणकै बीच हामी नेपालीहरुको महान पर्व दशैँको माहौलमा छौँ । चाडपर्वको समयमा मानिसहरुको दैनिकी परिवर्तन हुन्छ । सधै काममा व्यस्त हुनेहरु यो समयमा घरमा परिवारसँग रमाइलो गरेर विभिन्न परिकारहरु खाएर बस्छन् । दशैँको विशेष परिकारको रुपमा मासुलाई नै लिने गरिन्छ । दशैँमा आफन्त र परिवार, साथीभाइ जसको घरमा पनि मासु नै पाक्छ । आफ्नो आउनेहरुलाई सबैले मास...
हाँस्यकलाकार मनोज गजुरेलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । आइतबार गरिएको पीसीआर परिक्षणमा कोरोना पुष्टि भएको सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उनले जानकारी गराएका छन् । टाउको दुख्ने, ज्वरो आउँने र ढाड दुख्ने समस्या देखिएपछि परिक्षण गराउँदा पोजेटिभ देखिएको उनले उल्लेख गरेका छन् । कोरोना पुष्टिपछि सेल्फ आइसोलेसनमा रहेको समेत उनले बताएका छन् । गजुरेलले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘मलाई अहिले गार्हो हुनेखालका सि...
इण्डियन प्रिमियर लिग आईपीएल क्रिकेटमा किङ्स इलाभेन पञ्जाबले कोलकाता नाइट राइडर्सलाई हराएको छ । सारजहा मैदानमा राति सकिएको खेलमा पञ्जाब ८ विकेटले विजयी भएको हो । टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको कोलकोत्ताले दिएको १ सय ५० रनको लक्ष पन्जाबले १८ ओभर ५ बलमा २ विकेटको क्षतिमा भेट्टायो । यसअघि कोलकोत्ताले ९ विकेटको क्षतिमा १ सय ४९ रन बनाएको थियो । जितसँगै १२ अंक जोडेर पञ्जाब चौथो स्थानमा उक्लिएको छ भने १२...
रंगेली / रंगेली नगरपालिकाका मेयर दिलिप बगडीयालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । सोमबार बिहान मेयर बगडीयालाई संक्रमण पुष्टि भएको हो । स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि आइतबार बगडीयाले प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा स्वाब परिक्षण गराएका थिए । साेमबार पाेजेटिभ रिपाेर्ट आएकाे हाे । कोरोना पुष्टी भएपछि उनी होम आईसोलेसनमा बसेका छन् । मेयरले आफुलाई सामान्य जिउ दुख्ने र खोकी लाग्ने समस्या रहेको बताए । ...
विराटनगर । कोरोना संक्रमणका कारण विराटनगरमा थप एकजनाको मृत्यु भएको छ । नेपाली कांग्रेस मोरङ जिल्ला सदस्य ५४ वर्षीय दिना मण्डलको मृत्यु भएको हो । कोरोना संक्रमण देखिएपछि विराटनगर महानगरपालिका ८ का मण्डललाई उपचारका लागि विराट मेडिकल कलेजमा भर्ना गरिएको थियो । उपचारका क्रममा शनिबार बेलुका मृत्यु भएको विराटनगर महानगरपालिका जनस्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख रमेश कार्कीले जानकारी दिए । सामाजिक क्षेत्रमा सक्...
प्रदेश १ मा आज ३ सय ८९ जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएका छन। प्रदेश १ को सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार शनिबार मोरङमा २ सय ६५, सुनसरीमा ६०, झापामा ४१, इलाममा १०, उदयपुर, खोटाङ, संखुवासभा, तेह्रथुम, सोलुखुम्बुमा समान १ जना र प्रदेश १ बाहिरबाट ४ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार विराटनगर महानगरपालिकामा १ सय ७ महिला र १ सय १८ पुरुष गरी कुल २ सय २५ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसैग...
इनरुवामा आज एकै दिन छ महिने शिशु सहित ४५ नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । असोज २५ गते सोमबारे हाटमा जम्मा ९४ जनाको स्वाब संकलन गरी कोरोना परीक्षण गरिएका मध्ये ४५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो । जसमा ६ महिने शिशु देखि ८० वर्षिय वृद्दा समेत रहेका छन। ६ महिने शिशु इनरुवा वडा नं. १ का हुन भने ८० वर्षिय वृद्दा इनरुवा ४ कि हुन। आज थपिएका संक्रमितहरु इनरुवा नगरक्षेत्रमा रहेका सरकारी कार्यालयहरु, जिल्ल...
भोक्राहाबाट लागुऔषध सहित १ जना पक्राउ
सुनसरी। भोक्राहा नरसिंह वडा नं. ३ का ४० बर्षीय चन्द्र नारायण साह प्रतिबन्धित लागुऔषध सहित पक्राउ परेका छन । आज विहान ७ बजे विशेष सुराकका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले साहलाई नरसिंह वडा नं. ३ शिवगंज चौकबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो । नियन्त्रण संगै साहले बोकेको प्लाष्टिकको झोला चेकजाँच गर्दा लुकाई छिपाई राखिएको लागुऔषध डाइलेक्स-डिसि ३० बोतल फेला पारी बरामद गरिएको जिल्...